यस्ता संकेत देखिए भने बुझ्नुहोस् मृत्यु निकट आइसकेको छ ! - Dainik Online Dainik Online
यस्ता संकेत देखिए भने बुझ्नुहोस् मृत्यु निकट आइसकेको छ !
प्रकाशित मिति : १० कार्तिक २०७७, सोमबार ४ : १५
हामी सबै (मानिस)लाई थाहा छ सबैले एक न एक दिन मर्नु पर्छ । तर, मानिस सधैं एउटा शब्दबाट डराउँछ, त्यो हो ‘मृत्यु’ । मृत्यु कसैलाई पनि प्यारो लाग्दैन । तर एक न एक दिन सबैले मृत्युलाई अंगाल्नु पर्ने हुन्छ ।
यस्ता छन् ती संकेत, जसले तपाईंको मृत्यु निकट छ भन्ने सन्देश दिन्छ,